UPablo noVirginia, nguMarcel Mithois. Ukubuyekeza kafushane | Izincwadi Zamanje
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 24/09/2021 12:00 | Amabhuku, I-Novela, Izindaba
Kunezincwadi obuyela kuzo njalo futhi lokhu ngikwenza njalo uma ngifika ekhaya, UPablo noVirginia, of UMarcel Mithois. Ingenye yalezo zincwadi okuthi, okwamanje, ubudala noma ukuxhumana okukhethekile, kuhlale kubhalwe ku- imemori ebalulekile futhi kufanele uwafunde futhi ngezikhathi ezithile. Ukuqhubeka nokuziqinisa kulowo mbono nokujabulela, nakho okubalulekile. Namuhla ngikhuluma ngaye.
1 UMarcel Mithois
2 Mina noPablo, eVirginia
3 Umshado waseParis
Intatheli, umbhali wamanoveli, umbhali wemidlalo yokudlala nombhali wesikrini UFrench, wazalwa ngoJuni 15, 1922 ePort Saïd (Egypt) futhi washonela eParis ngo-2012. Umbhali wemisebenzi eminingi eyimpumelelo noJacqueline Maillan njengo I-Croque-monsieur y Ukushiswa yilanga, wayebuye abe ngumbhali wamabonakude ochungechungeni lwethelevishini Les Quatre Cents Coups de Virginie, ithathelwe kwikholamu yakhe evikini Izinsuku zeFrance.
Ngasikhathi sinye baphinde bamnika ne- ikholomu ehlekisayo kwakunjani UPablo noVirginia, nokuthi yini eyayine impumelelo enkulu. Wabhala ngaphezulu kwamakhulu amabili iminyaka emine ngaphandle kokuphazanyiswa futhi waphinde wayishicilela incwadi ngokukhetha ezinye zazo. Baze benza i- Izinhlelo ze-TV ebuye yaguqulwa lapha futhi yabonakala ku- I-TVE ngo-1968. Badlala kuwo UCarlos Mendy njengoPablo no UConchita Montes njengoVirginia.
Mina noPablo, eVirginia
Izindaba zikaPablo noVirginia, umshado waseParis ongenazo izingane, iyi- Umlando wesikhathi sakhe - amashumi ayisithupha - womphakathi nowomzwelo, ekhonjiswe ngokuzidela kwakhe nokungahambi kahle kwakhe. Us UPablo ubatshela mathupha futhi konke kubhekiswe noma kufakwe inkanyezi eVirginia, owesifazane onomlingiswa okhetheke kakhulu, otatazelayo futhi kwesinye isikhathi uqulekile kepha uhlala ehlekisa.
Ngafika kubo lapho ngibathola ngelinye ilanga sengineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili phezulu eshalofini egumbini likababekazi ezweni. Isembozo singenze ngacosha incwadi ngokushesha. Ngibe sengithola ukuthi bekuyiyo isipho esivela kumama ngiya kubaba, ezazibhaliselwe iCírculo de Lectores. Udaba lwaluvele ngo-1964. Ngaya nalo ekhaya.
Akuzange kungithathe isikhathi eside ukuyifunda futhi kwaba njalo enye yamathonya ami okuqala ngokuthanda kwami ​​ukufunda nokubhala nge izwi elilandisayo lowesilisa.
Ngamehlo anamuhla UPablo noVirginia Akuyeki ukuba khona ukufunda njengokungenangqondo njengoba kuswele ukuzenzisa okuningi kunokuzijabulisa ngamahlaya asuselwa kubalingiswa abaphikisana ngokuphelele nabaphikisi nezimo eziningi ezilinganayo noma ezingajwayelekile ababandakanyeka kuzo.
La ukuzola, ukukala nokuqonda kubeka Pablo, elula futhi ethule esebenza ehhovisi, eshade noVirginia, umama wekhaya, futhi emthanda kakhulu. Usitshela, nge-phlegm eningi kepha futhi nothando, ubumnene nokuhlekisa, iziqephu ezimlingisa, okuphambene, oqinile, onamawala futhi kwesinye isikhathi uqulekile, kepha njalo ezimisele ukwenza okuthile noma ukwenza okuhle. Isihluthulelo phakathi kwalokhu okubili kukhona Ukuzithoba kulabo buthakathaka noma ukukhubazeka.
Ngakho, Ama-adventures akhethiwe angama-25 lokho okusencwadini futhi okukhulunywe ngakho ngezahluko ezimfushane ezisukela ebufikazini bayo kuya funda ukushayela noma ukubhukuda -imbili yobumnandi- kuze kube hlela amaqembu izingane zabangane noma eziyinhlekelele imidlalo yamakhadi, zenzele ingane kadadewethu nezingane ezithile ezingenakwenzeka noma unakekele inja enkulu (engeyona) yomunye umngane. Kepha futhi uyaphikelela Funda ukudansa umdanso we-classic noma i-twist, bhala incwadi udlale igalofu, ebika uchungechunge lwezimo eziyinqaba futhi ezimnandi kuneVirginia ezama ukuzixazulula ngendlela engcono kakhulu noma elula kakhulu kuye.
Kukhona nezinye izahluko ezibekiwe ku ukuhamba ngeholide noma nabangane, njengezinkambo ezimbili zasolwandle ezigcwele okungalindelekile nokungaqondani, ukuphuma uye ensimini nomunye umbhangqwana womshado ngasikhathi sinye noma funny duck ukuzingela kwenye yaleyo mizamo yaseVirginia ukuzama ukugqama emphakathini.
Una ngaphezu kokufunda okulula nokulula lokho kungatholakala kuphela mhlawumbe ku izitolo zezincwadi ezinesiko noma isandla sesibili nesesithathu endaweni yonke yokubhala ye-intanethi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » UPablo noVirginia, nguMarcel Mithois. Landisa kafushane